October 2019 - Page4of6- Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ သုံးခွကျေးရွာရှိ လယ်ထဲတွင် မြွေဝင်ရောက်မှုသတင်း
admin | Oct 8, 2019 | ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ (၀၉ ၁၀) အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ သုံးခွ ကျေးရွာရှိ ပိုင်ရှင် ဦးထွန်းမင်း၏ ၁ ဧကခန့်ရှိ လယ်ထဲ၌ လုံးပတ်(၁)ပေ၊ အရှည်(၁၀)ပေခန့် စပါးအုံး မြွေတစ်ကောင် ဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၀၉ ၂၀) အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့်...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့နယ်၊ အမ်း-မင်းဘူးလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၆/၁)တွင် မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်မှုသတင်း
admin | Oct 8, 2019 | မီးလောင်မှုသတင်း, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ (၁၄ ၁၀) အချိန်ခန့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့နယ်၊ အမ်း-မင်းဘူးလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၆/၁)တွင် ယာဉ်မောင်း ဦးစောလင်း မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် (MDY-2C/5272) (၁၂)ဘီး ကုန်တင်ယာဉ်သည် မန္တလေးမြို့မှအမ်းမြို့သို့ မောင်းနှင်လာစဉ် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းရှိ...
ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့နယ်၊ မံခံရေခူးကျေးရွာအုပ်စု၊ စံလွန်ယန်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
admin | Oct 3, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂ . ၁၀ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၂၀ ၄၅)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့နယ်၊ မံခံရေခူးကျေးရွာအုပ်စု၊ စံလွန်ယန်ကျေးရွာ စစ်ဘေးရှောင်မိသားစုများနေထိုင်သော အိမ်အမှတ်(B – 17)နေ ဒေါ်ငွါးမလဲ၏ (၁၈x၁၈) ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်းနေအိမ် တွင် အိပ်ယာအနီး ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းထားပြီး...
၄ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၄)တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
၂ . ၁၀ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၀၉ ၁၀)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၄)၊ အိမ်အမှတ်(၄/၁၂၀)နေ ပိုင်ရှင် ဒေါ်နန်းမွန်း၏ (၂၀x၃၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ(၂)ထပ်နေအိမ်၏ (၁၅x၁၀)ပေ၊ မီးဖိုဆောင်တွင် ရေခဲသေတ္တာ Safe Guard အပူလွန်ကဲရာမှ အနီးရှိ အကာထရံသို့...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ အထက(၂)ရှေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်(၁)စီး မီးလောင်မှုသတင်း
၂ . ၁၀ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၀၈ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ အထက(၂)ရှေ့တွင် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအတိုင်း မင်္ဂလာဒုံမှ ဆူးလေဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုသန့်ဇင်ဦး မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမှတ် (1K – 7792) KIA Sorento အမျိုးအစား၊...
Page4of 6« « Previous...23456Next »